warkii.com » Xog Kooban: RW Kheyre oo Bilaabay inuu iska Falliiro Saaxiibkiisii Afarta Sano la isla soo Kifaaxay Farmajo.
Xog Kooban: RW Kheyre oo Bilaabay inuu iska Falliiro Saaxiibkiisii Afarta Sano la isla soo Kifaaxay Farmajo.
Waa dhab in la soo gaaray xelligii shaararka la iska jeexjeexi lahaa oo wixii hallaabay la isku riixriixi lahaa muddo xileedkii dowladda oo gabaabsi ah awgeed. RW Kheyre oo beryahanba la hadal hayey inuu ka lexan doono Farmajo si dhamaan wixii hallaabay duqa loogu wareejin laha isagana uu dhinac ka raacayo saamileyda siyaasadda. Wixii hallaabay muddadii la wada joogay ma yara mana ah wax hal qoraal lagu soo koobi karo waxaasa ugu muhiimsan:
Fashilka siyaasadda Arrimha gudaha oo aan tira lahay:
Waxaa lagu fashilmay Ammaanka, Nolosha, Maamul goboleedyada, tirtiridda awoodaha Golaha Sahcbiga, Burburinta Ciidanka NISA, Guuladarada joogtada ah ee CXDS ay la kulmayeen, kala fogaanshaha shacbiga iyo isku dirkooda, caburinta xisbiyada iyo siyaasiyiinta dalka iyo in kale oo ka sii badan.
2. Fashilka Siyadda Arrimaha DIbadda:
Guud ahaan gayiga oo aan ka sii noqoneyno dal ku dhexjira caloosha Itoobiya oo iyadaba sii dhimaneysa haddaan gaalo ka soo gaarin oo aysan badbaadin sidii kal horaba loo sameeyey,
Ka talo iyo tusaale qaata Kaligii taliyaha Erateriya, Afawerki.
Kenya oo aan la sheegi Karin halka ay siyaasaddeena ku wahan ay tahay saaxib misa cadow.
Dacwaddii badda oo la dayacay lagana kala eryey aqoonyahanndii dacwadda waday.
Kenya oo loo sugay intay ku guuleysaneynso kursiga golaha amaanka.
Go’aankeenna iyo diblomasiyadeenna oo ku soo kooban tay inaan fulino waxa ay rabto itoobiya.
Haddba RW kheyre shirka golaha wasiirada ee maanta oo u muuqda inuu u isticmaalay inuu si dedban uga leexdo Seddigiis MW Farmajo ayaa u muuqada mid yididiilo ummada u keenaya inay doorasho dalka ka dhici karto. Hadalka RW waxaa ka muuqata inuu jiro ismaan dhaaf u dhaxeeya isaga iyo MW Farmajo waxaana la ogeyn inuu yahay mid shakhsiyadeed oo ah aniga sidaan ayaan wax ku noqon karaa ama mid waddaniayeed oo ah dalkan waa khaasaarayaa haddii aan sida saxda ah la yeelin. Sida saxdaana waa ina hay’adaha distuuriga la soo doorto afartii sanaba mar.
Kheyre oo aan aysan ka muuqan farxaddii iyo is jooxirintii lagu yaqiin ayaa yiri “Waa in doorashadu ay ku dhacdo waqtigii loogu tala galay, lagana fogaadaa in lagu shaqeeyo fikir ku saleysan mudo kordhin sababtoo ah mudo kordhintu waxay horseedi kartaa qalaase siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuur“,
Hadalkaan dadka akhriyaa siyaasadda waxaa uga muuqatay:
Inuu Kheyre go’aansaday inuu ka falliirto MW Farmajo.
Inuu si cad u baalmaray warkii Xaliima Yarey oo uu hadda ka dhigay Beenley Danley ah, maadama ay dowladda oo uu isaga hogaamiyo aysan ogoleyn muddo kororsi iyo 13 bilood iwm.
Kheyre oo ogaaday in kalsoonida lagala noqon rabo oo uu is leeyahay usii dhigo Somalida in waxa laguugu eryey ay tahay in doorasho la’aado oo aan muddo kororsi la sameyn.
Inuu ka hor dagayo maamul goboleedyada go’aamada suuragal ah ee ay gaari doonaan, kuwaas u muuqda inay raaci doonaan jidka kheyre uu hadda u muuqdo inuu qabsan rabo.
Haddab Villada oo kala qeybsan tahay maxaa uu haray MW Farmajo iyo Kooxdiisa marka la eego hadalkan ka soo yeeray golaha wasiirada:
In sida ugu dhkhsaha badan loo eryo Kheyre, lalana kulmo madaxda mucaaridka iyo Mamaulgoboleedyada si loo dhiso dowlada Midnimo qaran oo doorasho ka shaqeyso mudadana la isk agarto.
In MW iyo Kooxdiisa ay ku raacaan RW iyo Golaha wasiirada iclaaminta laakiin hadhow dhexda looga leexdo, lana abuuro quiqulatooyin kale.
Siyaasadda Somaliya oo kacaa kufeysa balaynu aragno waxa dhaca 48 saac ee soo socota.